सिरहा ।नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ आउने निर्वाचनलाई सामान्य निर्वाचनको रुपमा नलिन अनुरोध गरेका छन् ।
अहिले पनि राजावादी शक्तिहरु एकजुट हुन कोशिस गरिरहेको भन्दै अझै पनि संविधान सुरक्षित नरहेको उनले बताए ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेला दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै प्रतिगामीहरु संविधान मास्ने खेलमा लागिरहेको दाबी गरे ।
अहिले आफू प्रतिकृयावादीहरुको लागि घाटीमा अल्झेको हाडजस्तै भएको भन्दै आफ्नो चरित्रहत्यामा उत्रिएको बताए । उनले भने, ‘अहिले माओवादी केन्द्र, त्यसको नेतृत्व मूख्यतः प्रचण्ड प्रतिकृयावादीहरुको लागि बडो गाह्रो परेको छ । उनीहरु अहिलेपनि कसरी माओवादीलाई खुम्च्याउन सकिन्छ ? प्रचण्डलाई घेरा हाल्न सहिन्छ होला भनेर लागिरहेका छन् ? त्यसैले उनीहरु भए नभएको कुरा गरेर मलाई ‘ह्यूमिलेट’ गर्न खोजी रहेको छ ।’
मधेश प्रदेशमा शेखर पक्षको निर्णय : गठबन्धन अस्वीकार, अटेर गरे आफ्नै रणनीति बारमा गठबन्धननिकट प्यानल नै विजयी